Kal-fadhiga barlamaanka Puntland oo ku dhowaad bil furan & ajandayaashii adkaa oo weli laalan.
November 20, 2020 Xuseen 0
Puntlandtimes (Boosaaso)-Barlamaanka Puntland oo kujira kal-fadhigooda 47aad ayaan weli guda gelin qaar kamid ah ajandayaashii loo asteeyey in looga hadlo mudada uu kal-fadhigu furan yahay.
Kal-fadhiga oo furan muddo bil ku dhowa ayaa waxaa ajandayaasha horyaalla ugu muhiimsan, la xisaabtanka xukuumadda, xaaladda gobolka Sool, mashruuca DP World ee dekedda Boosaaso, doorashada aqalka sare iyo arrimo kale.
Dhammaan ajandayaashaasi ayaa ah kuwa weli laalan, waxaana ilaa hadda barlamaanku meel mariyeen 3 xeer oo kala ah, xeerka Isgaarsiinta, xeerka dugsiyada quraanka kariimka ah iyo xeerka ilaalinta afka Soomaaliga.
Shacabka Puntland ayaa iswaydiinaya sababaha loo dib dhigay qodobadaan oo ku aadaya xilliga uu gabagabada marayo kal-fadhigu iyadoona xilligaasi ay isu diyaarin doonaan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya.
Qodobada la xisaabtanka xukuumadda iyo heshiiska dekedda Boosaaso oo ay gashay xukuumaddii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa xildhibaanada qaar sheegeen inay la sugayaan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.